Maitiro eJamaica neNepal Tourism anotungamira sei kuGlobal Resilience?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nepal Kuputsa Nhau » Maitiro eJamaica neNepal Tourism anotungamira sei kuGlobal Resilience?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Investments • Jamaica Kupwanya Nhau • Nepal Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Iyo Global Tourism ministerial conclave nhasi muKathmandu Nepal yaive neCrisis manejimendi uye Global Resilience pamusoro pechirongwa chayo.
Deepak Raj Joshi, CEO we Nepal Tourism Bhodhi anga ajoina iyo Global Tourism Resilience uye Crisis Center yakaiswa munzvimbo naHon Hon Gurukota Rezvekushanya Ed Bartlett anobva kuJamaica uye aimbova Secretary-General weUNWTO Dr. Taleb Rifai.
Mutungamiriri weNepal Rt. Hon. EP Sharma Oli akapa chipo kune iyo Jamaica gurukota rezvekushanya Edward Bartlett kuenda kumusangano wemakurukota muKathmandu nezuro.
Mutungamiriri weNepal Rt. Hon. EP Sharma Oli akapa Hon. Gurukota rezveKushanya kubva kuJamaica Edmund Bartlett nechipo.
Mutungamiriri weNepal Khadga Prasad Sharma Oli akazvarwa musi wa22 Kukadzi 1952 uye anonyanya kuzivikanwa se KP Sharma Oli. Oli akamboshanda semutungamiriri kubva 11 Gumiguru 2015 kusvika 3 Nyamavhuvhu 2016 uye aive wekutanga akasarudzwa semutungamiriri pasi pechangobva kugamuchirwa Bumbiro reNepal.
Mumwe mushumiri anodada Bartlett akaudza eTurboNews kubva kuKathmandu: "Mangwana tinoparura Global Resilience uye nzvimbo yekugadzirisa matambudziko paYunivhesiti yeNepal."
Nepal Tourism yave mutambi anokosha mukushanya kwepasirese mushure mekunge nyika yoda kuparara mushure mekudengenyeka kwenyika kwa2015. Zvakare, maCaribbean akatungamira mukugadzirisa dambudziko repasirese rinokanganisa kushanya kwepasirese uye indasitiri yekushanya.
Bartlett akataura kune vateereri vanokosha vevashanyi nevatungamiriri vehurumende muKathmandu achiti:
Saizvozvowo neCaribbean, Asia-Pacific inotsanangurwa seimwe yenzvimbo dzinonyanya kusangana nenjodzi pasi rese ine mahombekombe egungwa, nharaunda dzakadzika, nzvimbo dzine makomo, uye dzakawanda zviwi zvitsuwa. Mamiriro enharaunda enharaunda anoita kuti ive iri panjodzi yekukwira kwenzvimbo dzemakungwa uye nemamiriro ekunze akanyanya. Nepal, kunyanya, yakasarudzwa senyika yechina iri panjodzi zvakanyanya kune shanduko yemamiriro ekunze mu2018-2035 Climate Change Vulnerability Index. Munguva pfupi yadarika, iyo County yakasangana neshanduko zhinji dzakashata dzezvakatipoteredza dzakabatanidzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze uye kudziya kwepasi.
Izvi zvinosanganisira tembiricha yakakwira, kunaya kwemvura kusingafungidzike, mafashama, kuwondomoka kwevhu, kuyeuka kwechando kunonyungudika, uye chando chinodzokera shure, kunowedzera kana kuderera mukuyerera kwerwizi nekuparadzwa kwemasango. Shanduko dzakashata dzezvakatipoteredza dzakakanganisawo zviwanikwa zvemunyika sezvo makomo emunyika, zvikomo, nzizi, masango nenzvimbo dzakasarudzika zvinotsigira tsika nemararamiro akasiyana siyana.
Chikamu cheNepal chekushanya chiriwo panjodzi. Tourism imwe yemabhizimusi akakura muNepal uye yakapa $ 0.8 bhiriyoni) USD kuhupfumi, kana yakaenzana ne4% yehuwandu hwechigadzirwa chemumba (GDP), muna2017. Chikamu chiri kukura chiri kuramba chiri pasi pekutyisidzirwa kwakananga nekusajeka kubva kushanduko yemamiriro ekunze. . Muna 2015, nyika yakarohwa nekudengenyeka kwenyika kwakaparadza kwakakonzera kufa kwevanhu vangangoita zviuru zvisere uye kwakakuvadza vangangoita zviuru makumi maviri nezviviri.
Pakutanga gore rino, dutu rine simba rakauraya vanhu vangangoita makumi maviri nemasere uye zvakare rakakuvadza mazana. Mumashure mekudengenyeka kwenyika muna 28, nyika yakaona kuderera kwakanyanya kwevanosvika mukushanya nemari inowanikwa zvichikonzera kukanganisa kwakanyanya kune vanopfuura miriyoni imwe yeNepalis vane hupenyu hwakasungirirwa muchikamu ichi. Mari yezvehupfumi yekurasikirwa uye kukuvara munharaunda yezvekushanya yenyika nekuda kwekukanganisa kwemamiriro ekunze kwafungidzirwa pagore reavhareji re2015-2% yeGDP yakazara pakati pa3 na1971. zvese kuchengetedzwa kwekuenda uye kukwezva izvo zvinoguma nekuderera kwekushanya kwekuita.
Nekutenda, hurumende yeNepalese yanga ichiteerera shanduko dzemamiriro ekunze dzichangobva kuitika. Hurumende yakatoita chirongwa cheNational Adaption Programme of Action icho chakatsanangurwa sechishandiso chekuongorora kushupika kwemamiriro ekunze uye nekugadzirisa mamiriro ekugadzirisa mamiriro ekunze nekugadzirisa matanho akakodzera ekugadzirisa.
Iyo NAPA munguva pfupi yapfuura yaisanganisira kushanya seimwe yenzvimbo pfumbamwe dzemusoro uye dzekucheka-cheka kwekutanga kwekugadzirisa maitiro Zvinhu zvemhinduro yekuvaka kushingirira kwenyika kushingairira pasi peNational Adaptation Zvirongwa zveKushanda zvinosanganisira kufungidzira kwenyaya yepamberi yekunyevera iyo inoona kuti hurongwa hwakaomesesa hunopa hungwaru hwemamiriro ekunze uye hunokurudzira avo vari panjodzi yekuita vanogona kuvaka chivimbo chekushanya.
Kumwe kurudziro kuri kuita kudyara kwemamiriro ekunze chikamu chehurongwa hwebhizinesi kumakambani enharaunda mutoro uyo unobatsira mukusimudzira budiriro nekuendesa hupfumi, magariro uye zvakatipoteredza kune vese vane chekuita. Chikamu chezviitiko zvemamiriro ekunze chiri kugadziriswazve apo miraidzo yese yemakambani akazvimirira inogona kusangana kuti igadzirise nyaya dzine chekuita nekushanya nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Izvi zvinogona kugonesa kuchinjaniswa kwemazano, maitiro akanakisa, uye zviitiko. Iyi chikuva inogona zvakare kusimudzira zviwanikwa zvemari sekuda uye pazvinodiwa. Kujekesa mamiriro ekunze chirongwa cheNational Tourism Strategic Plan chinotungamira hurumende, nharaunda dzemunharaunda pamwe neindasitiri yekushanya nevashandi vayo, pamwe nevashanyi, pazvinhu zvine chekuita nekushanya kwakaringana uye kwakasimba.
Nepal Tourism Board yanga ichimisikidza nyika senzvimbo yepasi rose yekusimudzira kushanya muAsia. Muna Chikumi wegore rino Katmandu, Nepal yakaita musangano wekutanga weAsia Resilience Summit iyo yakarongedzwa pamwe neGlobal Travel uye Tourism Resilience Council neNepal Tourism Board. Musangano uyu wakagadzirirwa kuongorora marongedzero akabudirira muNepal ayo akatungamira kugadzikana uye kukura kwechikamu chekufamba kubva kudengenyeka kwenyika kwa2015. Iyo Summit yakabhadhariswawo sechirevo cheKushanya Nepal Campaign 2020, yakanzi "Nepal: yeLifetime Experience."
Mukuona, Nepal inofanirwa kupihwa mbiri yekupindura nenzira inokodzera uye nekusimbisa kumatambudziko anosangana nemamiriro ekunze ari kutarisana neramangwana renyika. Vamwe vese vepasi vanofanirwa kucherechedza. Mukucherechedzwa kwesimba renyika rekuvaka kushinga kwekushanya pamwe nekurangarira kuvhurwa kweKushanya Nepal Campaign 2020, ndinokudzwa kwazvo kuti Nepal yakasarudzwa senzvimbo yekumisikidza satellite inotevera Global Tourism Resilience uye Crisis Management. Center iyo ini ndine chivimbo ichabudirira kuvaka pane yekudzoreredza uye kusimba kuedza kwakaitwa nenyika kusvika parizvino.
Iyo Center ichashanda senzvimbo yekutarisa kutsigira kuyedza kwenzvimbo dzekuAsia kusimudzira kugadzirira kwekuenda uye kugadzirisa pamwe nekudzoreredza kubva mukukanganisa nematambudziko anokanganisa kushanya uye kutyisidzira hupfumi nehupenyu munzvimbo.
Yekutanga GTRCMC yakavhurwa muJamaica kuYunivhesiti yeWest Indies Mona Campus kutanga kwegore rino uye yakasimudzira zvikuru kugona kweCaribbean yekutsungirira kuburikidza nekuedza kwakanangana nekusimudzira kutsvagisa kwesainzi, kukwidziridza ruzivo rwevanhu, kuziva maitiro akanakisa, kugadzira maturakiti anobatsira, kusimudzira kuongorora zviyero uye zvakare kufambisa kubvunzana pakati pevatori vechikamu uye mapoka anofarira kuti ave nechokwadi chechokwadi chinobatanidza uye chekubatana nzira yekuvaka kushanya kwekushinga mudunhu.
Kufanana neiyo iri muJamaica, iyo Center ichagadzwa pano muNepal ichadaidzwa kuti ishande mune yepasirese mamiriro ayo anoonekwa kwete kwete chete matambudziko matsva asiwo mikana mitsva yebazi yekuvandudza zvigadzirwa zvayo, kuwedzera mikana yezvehupfumi yemuno uye dzikamisa hupfumi nezvido zvemagariro nezvezvakatipoteredza kuti uone kugadzikana kwayo uye kurarama kwenguva refu. Iri Center rinomiririra tariro uye nekuenderera mberi kwekushanya sechigadzirwa chemuno nedunhu uye sebhizimusi repasirese.